2 Beresosɛm 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 22:1-12
22 Na Yerusalemfo de ne ba kumaa Ahasia*+ sii hene ma odii n’ade, (efisɛ afowfo dɔm a wɔne Arabiafo+ baa nsra no mu no kunkum mpanyimfo no nyinaa,)+ enti Yehoram ba Ahasia bedii Yuda so hene. 2 Ahasia bedii ade no, na wadi mfe aduonu abien,+ na odii hene afe biako wɔ Yerusalem. Ne maame din de Atalia+ a ɔyɛ Omri+ banana. 3 Ɔno nso faa Ahab fiefo akwan so,+ efisɛ ne maame+ tuu no fo ma ɔyɛɛ amumɔyɛde. 4 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne sɛnea Ahab fiefo yɛe no, efisɛ ne papa wui no, wɔn na wotuu no fo+ ma ɔsɛee. 5 Wɔn afotu na ɔde yɛɛ adwuma,+ enti ɔne Ahab ba, Israel hene Yehoram+ boom ne Siria hene Hasael+ kɔkoe wɔ Ramot-Gilead.+ Ɛhɔ na wɔtow agyan wɔɔ Yehoram.+ 6 Enti ɔsan n’akyi kɔsaa ne ho yare wɔ Yesreel+ efisɛ bere a ɔne Siria hene Hasael kɔkoe no, wopiraa no wɔ Rama.+ Na Yehoram+ ba, Yuda hene Asaria*+ kɔe sɛ ɔrekɔhwɛ Ahab ba Yehoram+ wɔ Yesreel, efisɛ na ɔyare.+ 7 Nanso Onyankopɔn+ na ɔmaa Ahasia asehwe+ bae bere a ɔkɔɔ Yehoram nkyɛn no. Oduu hɔ no, ɔne Yehoram kɔɔ+ Nimsi+ banana Yehu+ a Yehowa asra+ no sɛ ɔntɔre Ahab fie ase+ no nkyɛn. 8 Ɛbae sɛ bere a Yehu de n’ani sii Ahab fie+ so no, ɛhɔ ara na ɔkɔkyeree Yuda mmapɔmma ne Ahasia+ nuanom mma a wɔsom Ahasia no, na okunkum wɔn.+ 9 Ɛnna ɔkɔhwehwɛɛ Ahasia, na wɔkyeree no+ de no brɛɛ Yehu; ná waguan akohintaw Samaria.+ Wokum no na wosiee no,+ na wɔkae sɛ: “Ɔyɛ Yehosafat+ a ɔde koma mũ hwehwɛɛ+ Yehowa no banana.” Ná obiara nni Ahasia fie bio a obetumi adi ahenni no so. 10 Ahasia maame Atalia+ hui sɛ ne ba no awu. Enti ɔsɔre kunkum Yuda fie adehye mma no nyinaa.+ 11 Nanso ɔhene babea Yehosabat+ faa Ahasia ba Yehoas,+ na owiaa no fii ahenemma a na wɔrekunkum wɔn no mu, na ɔde ɔne ɔbea a ɔhwɛ no no kohintaw ɔdan a mpa sisi mu no mu. Na Ɔhene Yehoram+ babea Yehosabat, ɔsɔfo Yehoiada+ yere no, (ná ɔyɛ Ahasia nuabea), Atalia nti, ɔde abofra no kohintawee, na wannya no ankum no.+ 12 Ɔne wɔn tenaa nokware Nyankopɔn fie hɔ ahintawee mu mfe asia+ bere a Atalia di hemmaa+ wɔ asase no so no.+
^ Ɔno ara na wɔfrɛ no Yehoahas wɔ 2Be 21:17 no.
^ Wɔsan frɛ no Ahasia wɔ nky 1, 2, 7-11.
2 Beresosɛm 22